Mba - Akụkọ Njem | Akụkọ Njem (Peeji nke 2)
Ihe ikwesiri ima ma oburu gaa njem na Austria a
N’isiokwu a anyị na-ewetara anyị ndụmọdụ ụfọdụ ị kwesịrị ịma ma ị gaa Ọstrịa n’oge ọkọchị a. Site na njem gaa na ngosi.
You chọrọ ịma ka asụsụ na okpukpere chi si arụ ọrụ na Wales? Lee ị nwere nkọwa niile iji hazie njem gị na Wales.
Emechiri obodo ochie na France ka oge na-aga
Obodo ndị kacha ịtụnanya ochie dị na France. Oghere ndị yiri ka ha kwụsịrị n'oge, na ọtụtụ akụkọ ihe mere eme iji chọpụta.
Woolacombe Beach, osimiri UK
Woolacombe Beach bụ ụsọ osimiri dị na United Kingdom, nwere mgbatị buru ibu yana ọkọlọtọ na-acha anụnụ anụnụ, iji nwee ọnọdụ dị mma.
Na sinik NC500 Nsoro na Scotland
Ọmarịcha 66zọ XNUMX nke na-agafe United States site n'ụsọ oké osimiri gaa n'ụsọ oké osimiri nwere ihe okike ya na Scotland: okporo ụzọ mara mma ...
Egwuregwu na Wales
Egwuregwu bụ ihe gbanyere mkpọrọgwụ na Wales dịka bọọlụ, ịgba rugby, cricket, snooker, wdg, ihe na-adọta ọtụtụ puku mmadụ.
Ihe oriri na-atọ ụtọ nke Guiana gastronomy
Na post a, anyị maara ụfọdụ ihe ọ dụ dụ nke gastronomy nke Guyana nke anyị ji gụchaa ọkwa mbụ anyị nke Kitchens of the World.
The Jurassic Coast, ebe Broadchurch usoro
A gbagburu usoro ihe nkiri TV a na-akpọ Jurassic Coast nke ógbè Dorset, na ndịda England
Shell Beach, ụsọ osimiri dị na Guyana ebe mbe na-eyi akwa ha
Shell Beach, Guyana, bụ ebe mbe na-agba mmiri kwa afọ
Gbọ njem na ọwa mmiri nke Birmingham
Otu ụzọ kachasị mma iji chọpụta Birmingham bụ njem ụgbọ mmiri site na ọdụ mmiri ochie ya. Ma ọ bụ na etiti akụkọ ihe mere eme nke obodo Bekee a gafere ọtụtụ narị ụzọ mmiri ndị a na n'oge ndị ọzọ rụrụ ọrụ dị mkpa dị ka ụzọ njem maka ihe dị arọ n'oge mgbanwe nke Industrial Industrial, mgbe ha gwara ndị ọzọ obodo ahụ. West Midlands.
West Highland Line, Scotland kacha mma sinik ụgbọ oloko
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịchọpụta ma nwee ọmarịcha ọdịdị ala kacha mma nke Scotland na njem ụgbọ oloko, egbula oge ịzụta tiketi gị iji banye n’ụgbọ okporo ụzọ West Highland Line, nke na-enye njem mara mma n’etiti Fort William na Mallaig, n’ime obi Ala di elu.
Shell Grotto, omimi nke English nke shells
Na gburugburu obodo Margate nke dị na Bekee, na ógbè Kent, e nwere ọgba dị omimi nke ejiri ihe karịrị 4 nde seashell chọọ ya mma. Aha ya bụ Shell Grotto na ọ bụ ebe nkiri njem nleta nke enigmas kpuchiri: ọ dịghị onye maara onye wuru ya, ma ọ bụ mgbe, ma ọ bụ maka ebumnuche.
Slọ Chatsworth: nnukwu ụlọ nnukwu obodo dị na obodo Bekee
Na ógbè nke Derbyshire bụ otu n'ime ụlọ obibi kachasị ukwuu na England: Englandlọ Chatsworth.
Okirikiri ala nke Dubai
Na United Arab Emirates anyị na-ahụ obodo mara mma nke Dubai mgbe niile, ebe a ga-atụle ...
Crystal Grottoes nke Molinos (Teruel)
Eriri afọ nke ụwa na-ezobe otu n'ime ihe ndị kachasị mma na-enweghị atụ na Europe. Na ebe nke ...
Ebe obibi ndị mọnk Dafni
Ebe obibi ndị mọnk Dafni dị nso na isi obodo Gris, 11 kilomita n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke ...
Omenala na omenala Myanmar
foto Ebe E Si Nweta: Kee-yuen Di iche iche nke ndị mejupụtara Mianmaa dị obosara nke na a na-ekwu na enwere otu groups
Lima, obodo ndị eze (VI) ikpeazụ
Oge ikpeazu n’obodo ndị eze, mgbe ị matara akụkọ ihe mere eme ya, ọdịnala ya, omenala ya, gastronomy ya, ebe ngosi ihe mgbe ochie, ebe ...